Madaxweynaha oo soo gabababeeyay booqashadii Dhuusamareeb – Radio Muqdisho
Madaxweynaha oo soo gabababeeyay booqashadii Dhuusamareeb
Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo gabagabeeyay booqasho 3 maalmood ah oo u ku tegey magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galguduud.
Madaxweynaha intii uu joogey Dhuusamareeb waxa uu kulamo gooni gooni ah la yeeshey, salaadiin iyo ergooyin ka kala socda beelaha gobollada dhexe, Waxayna isla qireen baahida loo qabo in la dedejiyo dhismaha dowlad goboleedka gobollada dhexe.
Madaxweynaha ayaa salaadiinta iyo ergooyinka kale ee uu la kulmey waxay si qota dheer isula gorfeeyeen arrimo muhiim ah oo ku saabsan, qabashada shirka lagu dhisayo dowlad goboleedka.
Ugu dambeyntii Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ergooyinka waxay isku afgarteen in la dhaqaajiyo shirka lagu dhisayo dowlad goboleedka degaannada gobollada dhexe ee Soomaaliya.
Askar Boolis ah oo tababar loogu soo gabagabeeyay Muqdisho (Sawiro)
Madaxweynaha J. F. S. oo galabta dib ugu soo laabtay Muqdisho